top 10 Meelaha Qarsoon ee Dunida | Save A tareenka
Home > safarka Europe > top 10 Meelaha Qarsoon ee Dunida
Tareenka Safarka ah ee Austria, Tareenka Safarka ee Britain, Tareen safarka Shiinaha, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Safarka tareenka Poland, Tareenka Safarka Skotland, Tareenka Safarka Switzerland, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Harooyinka dhulka hoostiisa, biyo-dhacyo qarsoon, Wadada-laga-garaacay magaalooyinka quaint, iyo aragtiyo qurux badan, adduunka waxaa ka buuxa meelo qarsoodi ah oo la yaab leh. Kuwaas kore 10 Meelaha qarsoodiga ah ee Adduunka dhammaantood waa la heli karaa socdaalayaasha laakiin badanaa waa la seegay. Sidaas, udiyaar garoobo safar maskaxda ku garaacaya meelaha ugu qarsoon uguna neefsashada badan adduunka.
1. Meel Sir Ah Oo Ugu Weyn Jarmalka: Berchtesgaden
250 kiiloomitir jidadka socodka, biyaha harooyinka aan caadiga ahayn ee turquoise, iyo meelaha ugu quruxda badan, Berchtesgaden National Park waa mid ka mid ah meelaha qarsoodiga ah ee qarsoodiga ah ee Jarmalka.
Beertan qaran waxay ku dhowdahay soohdinta Jarmalka uu la wadaago Austria waxayna hoy u tahay meelaha ugu quruxda badan Bavaria. Halka dalxiisayaasha badankood u safraan Black Forest, Swiss Alps, ama xarunta Yurub, jardiinadan qaran ee cajiibka ah waa la iska indhatiray. Sidaas, waxaad ka mid noqon kartaa safarada aad u yar, in lagu dalxiis tago Harada Konigssee, isku day inaad shir ugu timaado Watzmann - at 2,713 mitir loogu talagalay views breathtaking ee dooxooyinka, iyo dabeecadda duurjoogta ee aan la taaban.
Salzburg ilaa Berchtesgaden Tareen
Munich ilaa Berchtesgaden Tareen
Linz waxay ku socotaa Berchtesgaden Tareen
Innsbruck ilaa Berchtesgaden Tareen
2. Meesha Ugu Sir Badan Dalka Talyaaniga: Kaniisadda Santa Maria Dell Isola In Tropea
Inta badan dalxiisayaasha qoraxda ku qoda xeebaha Tropea ee dahabiga ah ma oga meeshan qarsoodiga ah. Si kastaba ha ahaatee, midig madaxooda ka sarreeya, fadhiya buur dhagax ah dusheeda, ku hareereysan Badweynta Tyrrhenian, waa Sanctuary of Santa Maria dell Isola.
Ma cadda in suugaanta ay dhisteen Benedictines ama Basilin mararka qarniyadii dhexe. Sidaas, waxaad ogaan kartaa taariikhda iyo quruxda ka dambeysa facade-ka la dayactiray macbadka. Shaki la’aan, guri keniisad ah oo badbaaday 2 dhulgariir, hubaal wuxuu hayaa qaar ka mid ah sirta ugu wanaagsan uguna xiisaha badan Calabria.
Vibo Marina oo ku socota Tropea Tareen
Catanzaro ilaa Tropea Tareen Tareen ah
Cosenza ilaa Tropea Tareen Tareen ah
Lamezia Terme oo ku socota Tropea Tareen
3. Meesha ugu qarsoon Switzerland: Trummelbach Falls
Dooxada 72 biyo-dhacyo, waxaad u maleyneysaa inaysan jirin wax aan la ogaanin biyo-dhac ee Switzerland, laakiin waxaa jira. Mid ka mid ah meelaha ugu qarsoodi-sarraysa Yurub waa Trummelbach Falls. Noocan ah 10 biya-dhacyo baraf-ku-shubmay oo ku yaal Switzerland, waxaa lagu quudiyaa biyo ka dhalaalaya Eiger iyo Jungfrau.
Sidaa darteed, markaad booqanayso oo aad dhex lugaynayso buurta, bogaadinaysa biyo-dhacahan qarsoodiga ah, gasho dhar kaa ilaalin doona dhibcaha biyo dhaca ee barafka qaba.
A doon safar ilaa balliga dhulka hoostiisa mara ee ugu weyn Austria waa khibrad lama ilaawaan ah. Muuqaalkan weyn ee 'Grotte' ee magaalada Hinterbruhl, waa nidaam ka mid ah godadka, asal ahaan nin baa u sameeyay ujeedooyin macdanta, gudaha WWII.
Si kastaba ha ahaatee, balliga dhulka hoostiisa ah ayaa waagaas laga tegey. maanta, Seegrotte ee Hinterbruhl, loo beddelay mid ka mid ah dusha sare 10 meelo qarsoodi ah oo lagu booqdo adduunka.
5. Meel Sare oo Sir ah Shiinaha: Buurta Sanqing
3 ku soo gabagabeeyo daruuraha daruuraha, Mount Sanqing waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muqaddassan dhaqanka Shiinaha. Aragtida buurta Sanqing ma aha oo kaliya mid ka mid ah aragtida ugu xiisaha badan muuqaalka Shiinaha, laakiin sidoo kale leh macne muqadas ku ah caqiidada Taoist; ah 3 shirarku waxay matalayaan 3 Kuwa daahirka ah, ilaahyada ugu sareeya.
Agagaarka Sanqing wuxuu kaloo bixiyaa aragtiyo cajaa'ib leh, wadooyin, iyo qodobbo sixir ah oo lagu ogaanayo 10 Meelaha ugu quruxda badan aagga. Sidaa darteed, naftaada u qoro safar 2-maalmood ah oo aad ku tagto Mount Sanqing, si aad si buuxda ugu raaxeysan karto una baari karto dhammaan meelaha qarsoon.
6. Meelaha Sirta Ugu Sareeya Dalka Talyaaniga: Trentino
Quruxda buuraha Alps ee Talyaanigu maaha sirta adduunka ugu fiican. Qof walba wuu ogyahay safka buurta, muuqaalka, harooyinka alpine, iyo seeraha dabiiciga ah. Si kastaba ha ahaatee, Trentino ee Waqooyiga-Bari ee Talyaaniga, inta u dhexeysa harada Garda iyo Dolomites, inta badan waxaa lagu seegaa wadada loo maro yaabab dabiici ah halkan ku xusan. Halkan waxaad ka heli doontaa tiro aad u fiican oo ah 297 harooyinka si loo ogaado.
Intaa waxaa dheer, kaliya halkaan waad ku bogi kartaa saameynta iftiinka gaarka ah "alpenglow" ee dusha sare ee Dolomites, markay qoraxdu dhacdo.
7. Meel Sir ah oo Sare Poland: Kaymaha qaloocan ee Szczecin
Lagu beeray 30-meeyadii, Kaymaha Szczecin waa mid ka mid ah meelaha ugu qarsoon adduunka. Tani waxay ugu wacan tahay sababta kaynta ay uga go'day Poland, dhow magaalada Gryfino. Laga soo bilaabo 400 geedo geed dib loogu beeray 30-kii, maanta waxaad arki doontaa in yar oo keliya oo haray, weli meeshan ka dhigaysa mid gebi ahaanba mudan in la booqdo.
Sababta qaabka gaarka ah waa qarsoodi ilaa maanta; qaar badan ayaa isku dayay inay ogaadaan inay tahay wax dad sameeyay ama layaab dabiici ah. Sidaas, haddii aad go'aansato inaad booqato, waad baari kartaa sirta geedaha geedaha’ geed gaar ah qaab, oo sahamiyaan mid ka mid ah kaymaha ugu quruxda badan Yurub.
8. Meel Sir Ah Oo Ugu Sarreysa Hungary: Tapolca
Tapolca waa magaalo yar oo soo jiidasho leh oo ku taal Hungary, oo ku dhow Baltan Uplands keydka dabiiciga. Dalxiisayaasha badankood waxay u safraan Hungary si ay ugu soo dalxiis tagaan Budapest, laakiin magaalada Tapolca waa Hungary sirta ugu fiican ee la hayo. Marka laga soo tago u dhawaanshaha beero weyn oo qaran, magaaladu waxay leedahay haro ku taal bartamaha, oo leh barxad qurux badan iyo makhaayado ku wareegsan.
Sayidka, hadaad rabto inaad dhadhamiso cunnada Hungary, u boga oo ogaada Hungary dabeecadeeda cajiibka ah, iyo god haro, markaa tigidhkaaga u qoro Tapolca.
9. Meel Sir Ah Oo Ugu Weyn England: Hunstanton, Norfolk
Markaad booqato magaalada loo dalxiis tago ee Hunstanton ee Norfolk, waxay u ekaan doontaa magaalo ciida oo deggan oo badda agteeda ah. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markaad u soo dhaadhacdo xeebta iyo xeebta quruuruxsan, waxaad ka heli doontaa buuraha ugu quruxda badan. Dhirta qadiimiga ah ee Hunstanton waa lakabyo dhagax adag oo midab leh; dhagax sanjabiil miridh ah, nuuradda casaanka ah oo nuurad lagu sharraxay, oo ku hareereysan caleemo cagaaran iyo bad buluug ah.
Sidaa darteed, xeebta quruxda badan ee Hunstanton gabi ahaanba waa wax qurux badan, gaar ahaan qorrax dhaca. Waqtigan maanta ah, Dhagaxyada ayaa midabbada badala, marka la eego farqiga u dhexeeya badda iyo dhagxaanta ayaa xitaa ka sii duwan. In kasta oo quruxdeeda dabiiciga ahi jirto, dad badani ma oga meeshan qarsoodiga ah ee Bariga Ingiriiska. Sidaas, waxaad sifiican ugu deg degtaa inaad tikidhka tareenka aad u goosato xeebaha Hunstanton, intaan dunida kale ogaan.
Amsterdam ilaa London Tareen tareen ah
10. Jasiiradda Applecross ee Scotland
Cajiibkan Scottish-ka waxaa laga dhigay mid wadada kaliya laga mari karo 1975, iyadoo la marsiinayo waddo rogan oo dheer oo ka gudbeysa jasiiradda xeebta. Sidaas, hadaad rabtay inaad booqato jawharaddan fog, waxay ahayd inaad ku tiirsanaato safarka doonta kaligaa, sida inta kale ee degan jasiiradan.
Applecross waa tuulo yar oo qurux badan kuna taal xeebta Jasiiradda Scotland. Qol yar yar iyo guryo yaryar ayaa ku faafay buuraha cagaaran, badda fiirinaya, neefta kaa qaadi doonta.
Iyadoo kaliya 544 dadka deegaanka, waxaa jira sababo aad u yar oo loogu safro Applecross, laakiin muuqaalka muuqda iyo sawirada, gebi ahaanba ku kasbato boos ahaan mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya 10 meelo qarsoodi ah oo adduunka ah. Intaa waxaa dheer, Camusterrach iyo Ard-dhubh waa laba degsiimooyin kale oo aan ka maqnaan sahamintaada, maaddaama ay iyaguna si dirqi ah u taabtaan casriyeynta.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno qorsheynta safar lama ilaawaan ah xagga sare 10 Meelaha qarsoodiga ugu badan adduunka tareen.
Ma waxaad dooneysaa inaad gashid bartayada internetka “Top 10 Meelaha Qarsoon ee Dunida ”ee ku yaal bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fsecret-places-world%2F – (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Meelaha qarsoon Gabdhaha qarsoon qarsoodi ah Meelaha Sirta TopSecretplacesinEurope